Toetr’andro: hitohy ny orana tandrifin-drahona | NewsMada
Toetr’andro: hitohy ny orana tandrifin-drahona
Nilatsaka ny orana, omaly teto Antananarivo. Orana tandrifin-drahona iny, raha ny filazan’ny mpamantatra ny toetry ny andro etsy Ampandrianomby. Hanao tanik’orana hatrany ny volon’andro eto Antananarivo amin’ity herinandro ity, raha ny fanazavana hatrany.
Amin’ny ankapobeny, hahazo vahana indray ary hatanjaka ny tsioka avy any atsimo atsinanana na ny alizay amin’ny ilany atsinanan’ny Nosy. Hihamalefaka izany amin’ny ilany andrefana ary tsy marin-toerana indraindray.
Halefaka na antonony ny orana malefaka any amin’ny morontsiraka atsinanana sy ny ilany andrefan’i Madagasikara. Arahin-kotroka izany indraindray amin’ny tapany atsimon’ny afovoan-tany, manomboka ny alakamisy hatramin’ny fiafaran’ny herinandro.
Hisitraka orana tandrifin-drahona mety harahin-kotroka, indrindra ny takariva sy alina, ny faritr’i Melaky, i Bongolava ary ny manodidina ny tangoron-tendrombohitra Menabe sy Atsimo Andrefana. Ho mafimafy kosa ny fitsokan’ny rivotra amin’ny tapany avatratra sy ny tendrony atsimon’i Madagasikara.
Hidina ny maripana ambony ny tolakandro amin’ny ankapobeny, indrindra ny faritry ny afovoan-tany . Tsy hiova firy ny any an-kafa. Manodidina ny 12°C hatramin’ny 24°C ny maraina ary eo anelanelan’ny 24°C hatramin’ny 36°C ny tolakandro.